September 2, 2011 – democracy for burma
Shan Humanrights Report News August 2011 engl-4 cuts policy
On September 2, 2011 September 2, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
WAR: convicts were forced to wear military uniforms, carry weapons and serve as advance guard
A Shan convict who recently escaped from the Shan State war zone said he and other fellow convicts were forced to wear military uniforms, carry weapons and serve as advance guard for the main troops. The soldiers in his unit were also issued meager rations made up of 1 condensed milk can and3canful of rice. Some days all of them except the officers went without food. (SHAN)
special issue tavoy deep seaport development-impact by KWEKALU video engl.
Thailand: Chiranuch Premchaiporn, the head of the news website Prachatai, Trial resumes today
On September 2, 2011 By Burma Myanmar newsIn AseanLeaveacomment
20 villagers killed on Bomb blash by Kwekalu Karen News
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ တွင် ဗမာ့တပ်မတော် ခြေမြန်တပ်ရင်း ၅၅၅ တိုင်းရင်းမှူး မင်းဦး ဦးစီးတပ်ဖွဲ့ သည် တနင်္သာရီတိုင်းရှိ ထီးတယ်ထာဒေသ လယ်မူလားမြိူ့ နယ် ပလောခရိုင်တွင် ရွားသားနှစ်ဦးကို အကြောင်းမဲ့ သတ်ပစ်လိုက်ကြောင်း ကွယ်ကလူ ကရင်သတင်းစဉ် ( http://www.kwekalu.net/update/2%20lml%20villagers%20killed.html) တွင်ဖေါ်ပြထားပါသည်။ အဆိုပါ အသတ်ခံရသော ရွာသားများမှာ စောကော်လယ် (၃၀နှစ်) နှင့် စောကြာခယ်(၃၇နှစ်)တို့ ဖြစ်သည်။
သိန်းစိန်အစိုးရသည် ငြိမ်းချမ်းရေးစကားများကို လူကြားကောင်းအောင် ပြောဆိုနေသော်လည်းပဲ တကယ့်လက်တွေ့ တွင် ဗမာ့တပ်မတော်သားများ ကျေးလက်ကရင်ဒေသများတွင် ရွားသားများကို လစ်ရင်လစ်သလို ခိုးသတ်နေသည်ကို စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။ လွန်ခဲ့သည့်လများတွင်လည်း သံတောင်ကြီးဒေသမှ ဒဲကား(မဲသင်္ခာလေး) ရွာသားနှစ်ဦးအား အကြောင်းမဲ့သတ်ပစ်ကြောင်းကို ကေအိုင်စီသတင်းတွင်ပါရှိပါသည်။
Daw Aung San Suu Kyi on “How to overcome FEAR”by BDC